amin'ny Catherine Monreal
Fotoana be loatra overthink mpivady vaovao ny daty voalohany. Toe-javatra isan-karazany izy ireo milalao ao amin'ny lohany mikasika ny zavatra mety hitranga sy mety miasa-tena an-frenzy talohan'ny raha ny marina izy ireo niara-nahazo. Ny tena hevitra ny mahafantatra ny hafa indray maka toerana ny manahy momba ny na na tsy dia manao tsara fahatsapana – izy ireo mikasika ny tarehiny tafahoatra, miresaka be loatra, Tsy miresaka ampy, ary tamin'ny ary tamin'ny.
Daty voalohany tokony ho fotoam-mahafantatra ny hafa sy ny fihainoana sy ny fandraisana andraikitra izay izy ireo hoe:. Ahoana no ahafahanao mihaino ny hafa ianao, rehefa mandeha ny zavatra dia hilaza amiko hoe sy izay dia na tsy manao kosa izy dia miresaka? Raha ny hevitrao momba izany, raha ny marina ianao mandany ny fotoana nifantoka tamin'ny tenanao sy ny fanadinoana fa ny tena zavatra tokony hifantohana dia ny olona hafa. Ianao mandany andro amin'ny tenanao rehetra; manome ny aina ny tenanao sy ny mandany fotoana miaraka amin'ny olon-kafa.
Izany, tokony mba avy amin'ny lohany sy mifantoka amin'ny fotoana ankehitriny. Inona no izy nilaza fa afaka mifandray amin'ny? Inona no izy manao hoe tianao ny hahafantatra bebe kokoa momba ny? Hevitra tsara iray hafa dia ny mahatsiaro fa izany no daty voalohany koa, ary Izy no Tena azo inoana toy ny natahotra ianao. Izy no manadino mba hanokatra ny varavarana ho anao? Na tsy hisintona ny seza avy? Moa ve izy toa fotsiny dia hiresaka momba ny tenany, ary tsy mangataka anareo fanontaniana? Rehefa mahita ireo ohatra avy amin'ny fomba fijery fa ny hafa koa dia sahiran-tsaina, dia mora ny hamotsotra, ka jereo izay ny sisa mety hitarika ny alina.
Raha toa ianao ka sahiran-tsaina ny ratsy fofonaina, foana mints sasany ao amin'ny kitapom-bola na ny paosy. Ho mety raha ny sasany, na ny mosara Kleenex aminareo koa. Tsy tokony hitondra ny fanafody rehetra kabinetra, Fa manana ny zavatra vitsivitsy aminao na ny akaiky anao dia hanampy anao bebe kokoa ny hametraka miadana.
Ny hevi-dehibe rehetra izany dia ny hiaraka amin'ny daty afaka mifalifaly sy hahazo ny na ny orinasa. Fiainana mitranga ary indraindray ny zavatra tsy mandeha araka ny nomanina. Raha mitandrina saina mivelatra (sy ny fo) afaka mihodina na inona na inona mitranga amin '. Mety ho ny daty voalohany ny maro. Miala sasatra sy mankafy izany!